Ao Kerala, an-tapitrisany no nanao rojo olombelona ho fanoherana ny lalànan’ny mahaolompirenena ‘anti-miozolomana’ ao India · Global Voices teny Malagasy
'Mampididoza ny lalampanorenana ny lalànan'ny mahaolompirenena ary mamotika ny fandriampahalemana'
Voadika ny 15 Febroary 2020 5:16 GMT
Vakio amin'ny teny ਪੰਜਾਬੀ, Español, Ελληνικά, English
Rojo olombelona ao Kerala. Pikantsary avy amin'ny lahatsary YouTube nataon'i indusdotnews.
Tamin'ny 26 Janoary, tamin'ny fetin'ny Repoblikan'i India, olona an-tapitrisany maro no nanangana rojo olombelona mirefy 620 km niainga avy any avaratra ka nankany atsimon'i Kerala mitaky ny hanesorana ilay lalàna mampiady hevitra Citizenship Amendment Act (CAA na Lalàna Fanitsiana fahazoana ny Mahaolompirenena).
Manome lalambe hahazoana mahaolompirenena ho an'ireo mpifindramonina tsy miozolomana avy amin'ireo firenena manodidina avy ao Pakistan, Bangladesh ary Afghanistan ny Citizenship Amendment Act 2019 (CAA na Lalàna Fanitsiana fahazoana ny Mahaolompirenena), nampiharina tamin'ny Desambra 2019. Na izany aza dia nahazo tsikera avy amin'ny fikambanam-piarahamonim-pirenena sy ny fanoherana izy ity noho ny fanilihany tsy ara-drariny ny miozolomana. Heverina ho mitera-bokadratsy, tsy ho an'ny vitsy an'isa miozolomana ihany, fa ho an'ireo Indiana hafa rehetra ny Lalàna Fanitsiana fahazoana ny Mahaolompirenena, ampiarahana amin'ilay National Register of Citizens (NRC na Rejisitra Nasionalin'Olompirenena).
Vakio: India's citizenship bill fuels anti-Muslim prejudice fears
Ny lanonan'ny rojo olombelona dia nomanin'ny Left Democratic Front (LDF na Manda Demaokratika Ankavia), vondron'antoko politika elatra ankavia tarihan'ny Antoko Komonista an'i India (Marxista) sy ny mpitarika azy, ny lehiben'ny minisitra ao Kerala Pinarayi Vijayan.
Rojo olombelona iray hafa natsangan'ny Malaylalis (vahoaka avy ao Kerala mpiteny Malayalam) tao Kerala nandritra ny fetin'ny Repoblikantsika taona 2020. Hirefy 620 km miainga ao Kasaragod ka hatrany Thiruvananthapuram io rojo olombelona io hanoherana ny CAA sy NRC ary NPR ary ireo hetsika hafa manitsakitsaka ny lalampanorenena ataon'ny Sanghis (mpanjohy ny Rashtriya Swayamsewak Sangh (RSS), fikambanana mpanolotena milisy nasionalita haindò, elatra havanana.
Amin'ireo vahoaka ireo no ahitana politisiana, mpikatroka ara-kolontsaina, mpitari-pivavahana, artista ary olompirenena feno ahiahy. Henika sary sy lahatsary marevaka avy amin'ny hetsi-panoherana ny kaonty media sosialy:
Topimaso amin'ilay rojo olombelona mirefy 620 km ao Kerala ho fanoherana ny CAA, NRC & NPR manitsakitsaka ny lalampanorenana sy ny “Hum Dekhenge” (hahita isika amin'ny teny Malayalam) ao aoriana.
Aleo ny PM hamantatra ireo olona ireo amin'ny fiakanjony 🙂
Nanatevin-daharana ny hetsika ny Sefon'ny minisitra ao Kerala, Pinarayi Vijayan, ary niteny toy izao tao amin'ny fanambaràna iray :
Hampididoza ny Lalampanorenana ny lalàna mahaolompirenena ary hamotika ny fandriampahalemana ao amin'ny firenena hatramin'ny nikasan-dry zareo Bharatiya Janata Party hamotika ny laisisma. Efa nanambara izahay fa tsy toerana hanaiky ny fitondrana mahaolompirenena an-dry zareo i Kerala.
Nizara ity sioka ity ihany koa izy:
Tohankevitra manohana ny fitoviana i Kerala. Lahika tsy azo hozongozonina ny vahoaka amin'ity tany ity. Ohatra iray hafa amin'ny firaisankinanay ny roho olombelona notanterahan'i Kerala androany. Tsy handrihandry izahay amin'ity tolona ity ary handresy.
Mijoroa amin'ny fomba rehetra ahafahanao manao izany. Tena ilaina izany
SARIPIKA: Tanora vao manambady, Tanora mandray anjara amin'ny rojo olombelona ho fanoherana ny CAA
Miainga avy amin'ny mariaziny mankany amin'ny rojo olombelona mirefy 620 km
Voaforona tao Kerala mitaky ny hanesorana ny CAA.
Tsy navela ho tapaka ilay rojo olombelona na dia eny an-drano aza. Tahaka izany ny fankatoavana ny lalampanorenana.
Olona an'arivony no nanangana rojo olombelona mirefy 11km tao Kolkata, renivohitry ny fankalana West Bengal tamin'io andro io ihany.
Nahatratra 11 km nankao Golpark avy ao Shyambazar ity rojo olombelona ity ho fanoherana ny NRC/CAA/NPR.
Ny fetin'ny Repoblika dia manaja ny daty (26 Janoary 1950) izay nampanankery ny Lalampanorenan'i India sy nahatonga ny firenena ho repoblika vao niforona. Tamin'io andro io i India no nahita fanoherana manerana ny firenena izay miampanga ny CAA ho manimba ny fototra iray amin'ny rafitry ny lalampanorenana — mitsinjo an'i India lahika.
Fanoherana ny CAA/NRC/NPR tao India tany amin'ny tanàna miisa 56 tamin'ny fetin'ny Repoblika
Lakh ao amin'ny rojo olombelona ao Kerala
Rojo olombelona mirefy 11 km tao Kolkata
Fankalazana ny fetin'ny repoblika tao Shaheem Bagh
Diaben'ny Dalit sy Adivasi tao Bengaluru
Mihalehibe hatrany ny hetsika anti-CAA-NRC. Ho leo mijery sary sy mamantatra ireo karazan'olona amin'ny akanjony avy i Modi
Vakio ny pejy manokana: Who is paying the cost of India’s declining democracy? [Iza no hizaka ny fijotson'ny demaokrasia ao India] raha hijery ny antsipirihany kokoa momba ny hetsika fanoherana ny lalànan'ny fizakàna mahaolompirenena ao India.